Izithakazelo zakwaZuma – The Ulwazi Programme
Izithakazelo zesibongo esithize, indlela okutuswa ngayo kuteketiswe amaqhawe akulesosibongo akhombisa ubuqhawe ngezindlela ezahlukene ezibalulekayo. Uma kade kuyiwe empini, insizwa yakuleso sibongo ikhombise ubuqhawe, noma kuthi imfuyo ihlaselwe isilwane sasendle, enye yezinsizwa ibhekane nokufa ilwe naleso silwane isinqobe. Inkosi noma induna yalapho iyoveza esizweni ubuqhawe baleyo nsizwa bese kuthi khona lapho, imbongi ngobumbongi nobungoti bayo, izobongela leyonsizwa, imqale ngesibongo sakhe, yehle ngamaqhawe akubo iwasho. Imbongi iwakhuluma ngosinga nangendlela evusa imizwa nohlevane, injabulo nokunqoba. Kothi lapho isiwamemezile amaqhawe akubokalelo qhawe, bese bamfake naye kulolo luhla lwamaqhawe, basho nokuthi uzalwa ubani wakabani. Besho ubuqhawe abenzile. Lokhu kwakunweba izithakazelo zaleso sibongo ngamaqhawe akhona.
Izithakazelo zisebenza ekuhasheni inkosi, umnumzane, iqhawe noma lowo muntu thize wesibongo enconywa, ephakamiswa ngamandla, ubuhlakani nobuqhawe anabo. Kuthi uma ehhaywa, kukikize abesefazane. Ukuthakazela futhi enye yezindlela zokuzincengela uzama ukwenza ubuhlobo nokuxhumana nalabo obathakazelayo. Kuyenzeka ukuthi kuzolotsholwa emzini, noma kuzocelwa intombazane, noma kuzobikwa umonakalo owenziwe yindodana yalabo abathakazelayo.Uma abesibongo esithize bethanda ukudla okuthize, kothi lapho ezithakazelweni, bamemeze ukuthi abantu bakuleso sibongo badume ngokudla okuthize:isibonelo, abantu bakaZuma bathanda amasi nenyama, kuthiwa ezithakazelweni zabo: “oMaphumephethe, amasi ngala nenyama ngale” Inkosi yakwaZuma iseMpendle lapho isizwe saManxamalala sakhe khona, kwezinye izindawo iseNkandla nasePhatheni (Richmond). Nazi izithakazelo zakwaZuma.
Maphumephethe zandla zombili!
Nina bakwaMantomela kaMnaba
Okuth abafokazana befinyele
Nina nibe ninethezekile
Sengisho nina bakoChongochi
KaSigebhu kaNongele mude
Ngob’ ubuso buyaxhopha
Clan praises are praises of the people of a particular surname whom the heroes of that surname are mentioned when there is a function in that particular family. The praises are a way of showing recognition to the fathers and ancestors of that surname who were warriors in their own right.
Categories History Tags Clan Praises, izithakazelo